मिस नेपालकी प्रतिस्पर्धी नितिका कर्माचार्यद्धारा भोट गर्नका लागी अपिल - Entertainment Khabar
मिस नेपालकी प्रतिस्पर्धी नितिका कर्माचार्यद्धारा भोट गर्नका लागी अपिल
काठमान्डाँै । मिस नेपाल २०१९ कि प्रतिस्पर्धी ललितपुर इमाडोलकी नितिका कर्माचार्य मिस नेपालको मिस पपुलर च्वाइस अवार्ड जिताउनका लागी अफना आफन्त तथा शुभ चिन्तकलाई अपिल गरेकी छन ।
देश भरीबाट छनौट भएर आएका प्रतिष्पर्धिहरु मध्येबाट उनी अन्तिम २५ मा पर्न सफल भएकी हुन् । काठमान्डाँैका यूवाहरुमाझमा निकै चर्चित र सक्रिय छवि बनाएकी छिन् । उनी विगत ७ महिना देखी नेपाल इन्ट्रिगेटेड ब्लाइन्ड डेभ्लोमेन्ट असोसेसनमा आबद्ध रहेकी उनी समाजमा असाहायको लागी थप हौसलाको माध्यम बनिरहेकी छन ।
विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमको नेतृत्व समेत गर्दै आएकी छन् । समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मनोभाव राख्ने नितिकाले समाज परिवर्तका लागी युवाको सक्रिता अधिक हुनुपर्ने सोचका साथ अगाडि बढेकी छन ।
दृष्टिविहिनका लागी स्टार वियोङ द क्लाउड भन्ने प्रोजेटलाई आफनो जिवनको मुख्य लक्ष्यको रुपमा अगाडि बढाएकी उनले दृष्टि विहिनका लागी केही गर्ने समेत बताइन । जसबाट दृष्टि गुमाएका बालबालिकाको लागी विभिन्न सिपमुलक र दिर्धकालिन रुपमा उनीहरुको आर्थिक उपार्जनका लागी सहयोग पुग्ने अपेक्षाका लागी आफनो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएकी छन ।
सन् २०१६ को मिस इ कलेजकी विजेता , फ्रेस फेस २०१६ की विजेता , मिस इण्डिया सव कन्टेस्टेन्ट २०१७ को सेकेण्ड रनर अप बनिसकेकी कर्माचार्य मानव सेवा र सकारात्मक परिवर्तनलाई मुख्य केन्द्रिविन्दुमा राखेर काम गर्छिन । निरन्तर सामाजिक सेवामा सक्रिय नितिका मिस नेपाल बन्ने अटोठका साथ अघि बढेकि छिन् । उनलाई भोट गर्नका लागी तलको प्रतिक्रिया अपनाउनुहोस ।
Steps 1:- Download the Bip messaging app
Steps 2:- go to Miss Nepal link and click on her profile and vote for her
Step3:- #contestant number 11.
प्रियंका र आयुष्मानको ‘माया’
नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीले फागुणको १६ ग
वर्षाको आग्रह–‘जातीय विभेदविरुद्ध सबैले आवाज उठाऔं’
रुकुममा भएको घटनापछि नेपाली चलचित्रका कलाकारले यस बिषयमा आवाज उठा
हावामा मृत्युको आभास लिएर डर सल्बलाएको बेला
प्रकाश के.सी. समय, जस्तो घिस्रिएर चलेको होस् सम्झनाहरू मानसपटलमा
आजको पञ्चाङ्ग : श्रीशाके १९४२ ग्रीष्म ऋतु प्रमादीनामक संवत्सर नेप